खुशीको खबर: कोरोना सङ्कटको बेलामा जागिर चाइयो ? हामी दिन्छौं जागिर, तलब २० देखि ३० हजारसम्म ।। – Dainik Sangalo
December 1, 2020 570
लकडाउनका कारण अहिले धेरैले रोजगारी गु’माएका छन् । यो बीचमा अहिले रोजगारीका लागि अवसर पनि खुल्दैछन् । पढाइ सकियो, तर जागिर छैन ।’ यो धेरैलाई लागेको सम स्या हो । तर जागिर खोजेर समय वर्वाद गर्नुभन्दा आफुले केहि काम सिके जागिरले आफुलाई खोज्दै आउँछ आफुलाई खोज्दै आउँछ ।
नेपा लमा केहि काम गर्नेहरुको यति खडेरी छ कि तपाईं सोच्न समेत सक्नुहुन्न । यी काम सिके बेरोजगार बन्नुपर्ने वाध्यता हट्छ भने राम्रो कमाई पनि हुन्छ । राम्रो तलब सुबिधासहित अहिले पढ्दै गरेका व्यक्तिहरुले यस जागिरका लागि लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिनलाई जस्तो सुकै उमेरका व्याक्तीले पनि दिन सक्नेछन ! आवेदन दिएका सबैजना मध्य एस्ता निम्न सिपहरु जानेका व्याक्तीहरु लाई प्रथामिकता दिइने छ ! यी काम सिके बेरोजगार बन्नुपर्ने वाध्यता पनि हट्छ ! पढाइ सकियो, तर जागिर छैन ।’ यो धेरैलाई लागेको सम स्या हो । नेपा लमा केहि काम गर्नेहरुको यति खडेरी छ कि तपाईं सोच्न समेत सक्नुहुन्न । यी काम सिके बेरोजगार बन्नुपर्ने वाध्यता हट्छ भने राम्रो कमाई पनि हुन्छ कमाई पनि हुन्छ ।
नेपा लमा केहि काम गर्नेहरुको यति खडेरी छ कि तपाईं सोच्न समेत सक्नुहुन्न । यी काम सिके बेरोजगार बन्नुपर्ने वाध्यता हट्छ भने राम्रो कमाई पनि हुन्छ । राम्रो तलब सुबिधासहित अहिले पढ्दै गरेका व्यक्तिहरुले यस जागिरका लागि लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिनलाई जस्तो सुकै उमेरका व्याक्तीले पनि दिन सक्नेछन ! आवेदन दिएका सबैजना मध्य एस्ता निम्न सिपहरु जानेका व्याक्तीहरु लाई प्रथामिकता दिइने छ ! यी काम सिके बेरोजगार बन्नुपर्ने वाध्यता पनि हट्छ ! पढाइ सकियो, तर जागिर छैन ।’ यो धेरैलाई लागेको सम स्या हो । नेपा लमा केहि काम गर्नेहरुको यति खडेरी छ कि तपाईं सोच्न समेत सक्नुहुन्न । यी काम सिके बेरोजगार बन्नुपर्ने वाध्यता हट्छ भने राम्रो कमाई पनि हुन्छ कमाई पनि हुन्छ । ** पूरा विज्ञापन हेर्न तलको लिङ्क खोल्नुहोला **
तपाईंले एसएलसी सम्म पनि पढ्नु भएको छैन भनेक कफी बनाउन सिक्नुहोस् । बजारमा प्रोफेसनल कफी बना उन सिकाउने ठाउँहरु छन् । बजारमा कफी बनाउने व्यक्ति हरुको निकै खाँचो छ । यति गर्नुभयो भने तपाईंले महिना को ३० देखि ३५ हजार सम्मको काम पाईहाल्नु हुन्छ।धेरैलाई मार्केटिङ भनेपछि वाक्कै लाग्छ । तर तपाईं अरु सँग राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्छ भने विज्ञापनको आधारभूत ज्ञान राखेर मार्केटिङ सिक्नुहोस् । अहिले सामान्य रुपमा भ्याट बिल काट्न जान्ने, रिसिप्ट बनाउन जान्ने र अरुसँग कुरा गर्न जान्नेहरुलाई अनलाइन मिडियामा निकै राम्रो सुविधा छ । यस्तो काममा जानकार राख्ने र अलि बाठो मान्छे भए अनलाइन मिडियाहरुले २० हजारभन्दा माथि तलव दिन्छन् ।
यो काम सिक्न पनि त्यस्तै १५ दिन मात्र लाग्छ । कम्प्युटरमा रुची राख्नुहुन्छ भने कम्प्युटर बनाउन सिक्नुहोस् । यो काम गर्नेहरुको पनि ठुलो माग छ बजारमा । बजारमा हार्डवेर र सफ्टवेर सिकाउने संस्थाहरु प्रसस्तै छन् । कम्प्युटर बनाउन र नेटवर्कबारेमा राम्रो ज्ञान मात्र हुने हो भने त्यो व्यक्ति नेपालमा कहिलेपनि बेरोजगार हुँदैन । भिडियो क्यामरा चलाउन सिक्नुहोस् । नेपालका टेलिभिजनमा मात्र होइन विभिन्न सभा समारोहको भिडियो खिच्न जान्नेहरुको माग ठुलो छ भने आपूर्ति निकै कम छ । यो पेशामा त महिनाको १ लाख रुपैयाँसम्म पनि कमाउन सकिन्छ । दिनमा यस्ता क्यामराम्यानहरुलाई स्टुडियोहरुले वा विवाह जस्ता कार्यक्रम खिच्नेहरुले दिनकै ५००० सम्म दिन्छन् ।
नेपाली टाइप सिक्नुहोस् । अहिले नेपाली टाइप गर्नेको ठुलो माग छ बजारमा । नेपाली टाइप मात्र राम्रोसँग गर्न आउने हो भने त्यो व्यक्तिलाई पनि जागिरको खाँचो हुँदैन मोटरसाइकल सिक्नुहोस् ।हिजोआज हरेक जसो जा गिरमा मान्छे राख्दा मोटरसाइकल चलाउन जान्नेहरुलाई राख्ने गरिन्छ । वा उनीहरुलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ । त्यसैले मोटरसाइकल वा स्कुटर सिकेर लाइसेन्स निकालीहाल्नुहोस् । यो तपाईंलाई कुनैपनि बेला काम लाग्न सक्ने कुरा हो !
Prevअभिनेत्री श्वेता खड्काको बिहेदुलाहा आए परिवारसहित मेहेन्दी रसमको लागी काठमाडौँ !
Next‘१ हजार जनताले भन्दैमा प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारी भन्न मिल्दैन’
ट्याक्सीधनीको रोदन– १० वर्ष गाडी चलाएर जोडेको सम्पत्ति सखाप भयो, सोच्नै सकेको छैन